Jarida Laser-ka Gawaarida Gawaarida Gawaarida - Goldenlaser
Jarida Laser-ka Gawaarida Gawaarida
Iyada oo qayb ka ah nidaamka badbaadada dadban, barkinta shilalka gawaarida ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya hagaajinta amniga rakaabka. Shandadahaan kaladuwan ee kaladuwan waxay u baahan yihiin xalal wax ku ool ah oo dabacsan.
Goynta laser-ka ayaa si ballaaran loogu isticmaalay berrinka gudaha baabuurta . Sida goynta iyo calaamadeynta dharka sida roogaga gaariga, kuraasta gaariga, barkimooyinka gaariga, iyo sunshads gawaarida. Maanta, tikniyoolajiyaddan farsameynta leysarka jilicsan oo hufan ayaa si tartiib tartiib ah loogu dabaqay habka goynta barkinta shilka.
Nidaamka goynta leysku si weyn ayuu faa'iidooyin u leeyahay marka la barbar dhigo nidaamka jarista dhimista farsamada. Ugu horreyntii, nidaamka leysarku ma adeegsado aalado dhinta, taas oo aan kaliya badbaadinaynin kharashka qalabaynta lafteeda, laakiin sidoo kale ma keento dib-u-dhac ku yimaada qorshaha wax-soo-saarka sababtoo ah qalabka dhinta ee soo saarista.
Intaa waxaa sii dheer, nidaamka dhimista farsamada dhimista ayaa sidoo kale leh xaddidaadyo badan, taas oo ka dhalaneysa astaamaha ay ku shaqeyso iyada oo loo marayo xiriirka u dhexeeya qalabka goynta iyo walxaha. Way ka duwan tahay habka farsamaynta xiriir ee goynta dhimista farsamo, goynta leysku waa farsameyn aan xiriir lahayn oo ma keeni doono cillad xagga sheyga ah.
Intaa waxaa sii dheer, goynta laser-ka ee marada barkinta shilku waxay leedahay faa iidada marka laga reebo goynta dhaqsaha badan ee marada lagu dhalaaliyo dhinacyada geesaha isla markiiba, taas oo ka hortageysa isdabamarinta Sababtoo ah suurtagalnimada wanaagsan ee otomatiga, joomatari-yada shaqada adag iyo qaababka kala-goynta ee kala duwan ayaa si fudud loo soo saari karaa.
Muhiimadda Muhiimka u ah Jarida Laser ee Gawaarida Gawaarida
Goynta lakabyo badan
Goynta isku mar ee lakabyo kala duwan, marka la barbar dhigo goynta lakabka hal-mar ah, waxay soo saartaa mugga kororka iyo hoos u dhaca qiimaha.
Awood u yeelan kara daloolin si sax ah
Barkinta shilka ayaa looga baahan yahay inay jaraan godadka sii kordhaya. Dhamaan godadka lagu farsameeyo leysarka waa nadiif waana qashin iyo midab la'aan.
Nadiifi oo geesaha goynta kaamil ah
Sax aad u sarreeya ee goynta laser.
Geesaha otomaatiga ah xidhitaanka.
Looma baahna dib-u-shaqeyn kadib.
Faa'iidooyinka dheeraadka ah ee gooyaa laser laser ee COlaslaslaser
Sax laser goynta iyo daloolinta hal qalliin oo aan refitting
Nidaamka wax soo saarka otomaatiga ah ee qaada qalabka wax lagu raro iyo quudinta.
Soosaarka waxsoosaarka fudud iyo dhijitaalka ah ee loo maro barnaamijka PC.
Dabacsanaanta sare ee ka shaqeynta sababo la xiriira xulashooyin dheeri ah oo kala duwan.
Noocyo kala duwan oo miisaska qaabdhismeedka waaweyn ah oo la heli karo.
Qiiq dhammaystiran iyo shaandhaynta qiiqa goynta suurtogalka ah.
Nidaamka leysarka qaaska ee CO2 ee goynta barkinta shilka
Awooda leysarka 150 watt / 300 watt / 600 watt / 800 watt
Aagga shaqada (W × L) 2500mm × 3500mm (98.4 "× 137.8")
Miiska shaqada Miiska xamuulka qaada ee Vacuum
Xawaaraha goynta 0-1,200mm / s
Dardargelinta 8,000mm / s 2
Waxaan si farxad leh ugaala talineynaa Xalalka Jarista Laser ee Airbag. Nala soo xiriir maanta!